Ciidamo kala taabacsan DF & Ahlu sunna oo isku horfadhiya Dh/mareeb - Awdinle Online
Ciidamo kala taabacsan DF & Ahlu sunna oo isku horfadhiya Dh/mareeb
February 15, 2020 (Awdinle Online) –Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul Galmudug waxaa ka taagan Xiisad u dhaxeyso ciidamo kala taabacsan Dowladda Federaalka iyo Ahlu suna Waljameeca,waxaana magaalada laga dareemayaa saan saan colaadeed.
Ciidamo ka tirsan Dowladda federaalka ayaa soo buux dhaafiyay magaalada,kuwaas oo isku fidiyay isgoysyada muhiimka ah ee magaalada Dhuusamareeb laga soo galo.
Hoggaanka Ahlu suna ayaa ku goodiyay iney la soo baxayaan Hubkooda,islamarkaana isaga difaacayaan cid kasta oo fasaad wada,sida uu hadalka u dhigay hoggaamiyaha Ahlu suna Sheikh Macalin Maxamuud oo Dhuusamareeb kula hadlayay qaar ka mid ah taageerayaasha ururka.
Kooxda Ahlu suna ayaa ka soo horjeesatay doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee uu ku soo baxay Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor,waxaana hadad Dhuusamareeb isla jooga labo madaxweyne.
Madaxweynaha la aqoonsan yahay ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa wada kulamo uu ku xalinayo khilaafka taagan iyo waliba sidii shacabka Galmudug la isugu soo dhoweyn lahaa.
Previous articleQaban qaabada shirkii uu iclaamiyay madaxweyne dani oo ka socoda Boosaaso
Next articleAl-Shabaab oo sheegatay masuuliyada dilka sarkaal sare